Maxey cuntaa bisadda uurka leh | Bisadaha Noti
Maria Jose Roldan | | Cuntada
Uurku wuxuu u qaataa xoog badan hooyooyinka mustaqbalka, bisadaha ayaa lagu daray, sidaa darteed waqtigaas oo dhan waad uur leedahay waxaad u baahan doontaa tamar dheeraad ah, borotiin iyo kaalshiyam si eeydu u horumaraan sida ugu macquulsan si markaa, markay ka baxaan jidhka hooyadood ay sii wadi karaan koritaanka iyagoo aan la kulmin khataro aan loo baahnayn.
Haddii adiga iyo dhogortaadu ay sugayaan kittens, qodobkan ayaa ku xiiseynaya. Baro maxey cuntaa bisadda uurka leh.
Uurka bisadu wuxuu socdaa qiyaastii 65 maalmood, mudadaas 1 ilaa 10 dhalinyaro (mararka qaar ka badan) ayaa ku kori doona ilmo galeenkeeda. Jirkaaga waxaa ku dhaca dhowr isbeddel, sida ballaarinta ilmo-galeenka oo marka dambe sababa feeraha inay xoogaa kor u kacaan, cabirka calooshaadu way sii kordheysaa, naasahaaga weynaanayaan qanjidhada naaskaaguna waxay bilaabayaan inay soo saaraan caano marka ay daqiiqaddu soo dhowaato. . Si wax walboo ay u socdaan si habsami leh, bisadu waa inay qancisaa rabitaankeeda, maahan oo kaliya si aad u daboosho howl maalmeedkaaga, laakiin sidoo kale si jirkaaga uu u wajihi karo uurka dib u dhac la'aan.
Si tan loo sameeyo, mid ka mid ah waxyaabaha aad ugu baahan doontid waa inaad kordhiso xaddiga dufanka jirka ku jira. Sidan oo kale, waxaad ku heli kartaa keyd aad ku quudiso kuwa yaryar. Kadib, Maxaad cunaysaa?
Fikrad ahaan, cun cunto bisad tayo sare leh, oo aan lahayn wax soo saar ama badarka noocuu doono ha noqdee, maadaama ay ku jiraan dhammaan borotiinnada iyo macdanaha aad u baahan doonto inta lagu jiro marxaladdan. Waa inaad had iyo jeer ka tagtaa weelka buuxa, maxaa yeelay inta aad uurka leedahay waxaad mari doontaa dhowr waji oo ku saabsan rabitaankaaga cuntada oo waxay noqon doontaa mid aad u fudud oo wax ku ool ah qof walba inuu had iyo jeer cunno u helo.
Mar alla markay umusho, waa inaad sii siisaa kan waxaan filayaa si aad u quudin karto kuwa yaryar. Sidan oo kale, marka lagu daro, markii kittens-ka ay bilaabaan in naaska laga gudhiyo, waxay raaci doonaan hooyada quudiyaha mar kasta oo ay cunto u baxdo, sidaa darteed way ku dayan doonaan.
Beddelka kale waa in la bixiyo Cunto Yum bisadaha ama cuntada dabiiciga ah waxaa si toos ah uga iibsaday kawaanleyda (baalal digaag aan laf lahayn, hilibka xubnaha, kalluunka aan lafta laheyn). Haddii aad doorato tan dambe, xusuusnow inaad karkariso viscera iyo kalluunka si aad uga fogaato dhibaatooyinka. Sidaa awgeed, bisadda hooyada iyo dhasheedaba caafimaadkoodu wuu fiicnaan doonaa.
1 Intee in leeg ayaad siineysaa bisad uur leh
2 Si tartiib tartiib ah u samee
3 Sidaad u quudiso bisaddaada xilliga nuujinta
Intee in leeg ayaad siineysaa bisad uur leh
Waxa ay cunayso bisaddaada uurka leh ayaa tartiib tartiib uga kordheysa laga bilaabo waqtiga ay istaagto oo ay uur yeelato. Dhamaadka uurka waxaad cuni doontaa 50% ka badan inta caadiga ah ee ku jirta. Quudinta bisad uur leh waa fududahay. Way cunaan markay dhergaanna si fudud ayey u joogsadaan maxaa yeelay waxay haysteen ku filan. Kama badna, waxay cunaan waxay u baahan yihiin oo keliya.
Waxa muhiimka ah ayaa ah in bisadu marwalba ay haysato cunno ay hayso, si aysan u helin inay isku aragto cunto la’aan markay u baahdo. Waad dooran kartaa cuntooyinka bisadu jeceshahay, sida cuntooyinka qoyan, in kastoo kuwani ay kaloriin ka yar yihiin kuwa qalalan. Waad isku dari kartaa labada nooc ee cuntada si aad u daboosho baahiyahooda nafaqo.
Waxa bisaddaadu marna u waayi karin waa biyo macaan oo loogu talagalay inay ku fuuq baxaan, gaar ahaan hadday badanaa cunto cunto qalalan. Haddii gurigaagu weyn yahay, ha dhigin kaliya biyaha meel ka mid ah guriga, dhig dhawr meelood si ay marin ugu hesho markasta oo ay u baahan tahay inay biyo siiso.
Si tartiib tartiib ah u samee
Waa inaad si tartiib tartiib ah ugu gudubtaa cuntada cusub si bisaddaadu ula qabsato cunnadeeda cusub. Si tan loo sameeyo, waxaad ku qaadan kartaa 10 maalmood si tartiib tartiib ah oo aad ugu dareyso qaaciddada cusub illaa aad si buuxda wax uga beddeleyso. Tani waxay u oggolaan doontaa bisaddaada inay si wanaagsan wax u cunto iyadoo isbeddel tartiib tartiib ah oo caafimaad leh ay u samaynayso iyada iyo kittens-keeda.
Fikrad ahaan, cun cunnada yaryar in badan maalintii oo dhan. Waxaa lagugula talinayaa, sidaan kor ku soo sheegnayba, in bisadaadu ay leedahay cunto iyo biyo marwalba la heli karo. Kittens-ku waxay bilaabaan inay soo baxaan usbuuca sagaalaad ee uurka, sidaa darteed waxay noqon doontaa wixii markaa ka dambeeya markay aad u dareento in bisaddaadu ay in badan quudinayso.
Waxaad ogaan doontaa in culeyska bisaddaadu ay kordhayso markay wax badan cunayso, waxay u baahan tahay inay kaydiso dufanka ka dibna naas nuujiso bisadkeeda. Kordhinta culeyska ayaa gebi ahaanba caadi ah waana inaad lumisaa culeyska xad dhaafka ah intaad ku jirto 3-4 toddobaad naas nuujintaada.
Ha ka welwelin haddii bisaddaada ay xoogaa cunto xumo ka dhacdo dhammaadka uurka. Tani waa wax caadi ah waxayna muujineysaa in dhalmada aysan waqti dheer imaan doonin. Bisadu waxay bilawdaa inay dareento raaxo la'aanta dhalmada soo socota waana taas sababta ay wax yar u cuni doonto. Kaliya waa inaad hubisaa inuusan cunno u baahnayn waqti kasta, xitaa haddii aad aragto inuu wax yar cuno.
Nafaqada bisadaha uurka leh waxay muhiim u tahay dhamaan heerarka uurka iyo dhalmada kadib. Xataa haddii haddii aad ogaato inuu miisaankiisu hoos u dhacayo ama aanu waxba cunayn ama sidoo kale uusan biyo cabayn markaa waxaad u baahan doontaa inaad wacdo dhakhtarkaaga xoolaha wixii talo ah ee ku saabsan waxa la sameeyo iyadoo la tixgelinayo astaamaha gaarka ah ee bisaddaada.
Sidaad u quudiso bisaddaada xilliga nuujinta
Soosaarida caanuhu waa hawl si gaar ah u baahan. Cunto qaadashada badanaa way labanlaabtaa, laakiin xitaa way afar laabmi kartaa. Waad cuni kartaa wax ka badan xitaa inta aad uurka leedahay, waana caadi. Inta badan kittens-yada loo baahan yahay in la quudiyo, cunnada badan ee bisadda hooyadu waa inay cuntaa si ay ula qabsato baahiyaha nafaqada ee carruurteeda yar.
Waa inaad quudisaa bisaddaada dhowr jeer maalintii ama aad u oggolaataa helitaanka bilaashka cuntada, iyo sidoo kale inaad hubiso in biyo macaan had iyo jeer la heli karo. Cuntada qalalan waa in la qoyaa si loo kordhiyo qaadashada cuntada iyo biyaha, iyo in lagu dhiirrigeliyo kittens inay bilaabaan nibbinta cuntada adag. In kasta oo aad sidoo kale dooran karto isku darka cuntada qoyan iyo qalalan, sidii aad ku dooratay xilligii ay bisadu uurka lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Maxay cuntaa bisadda uurka leh